कांग्रेस महाधिवेशन : १२ साउनबाटै सम्भव छ, तल्लो तहको अधिवेशन ? Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
कांग्रेस महाधिवेशन : १२ साउनबाटै सम्भव छ, तल्लो तहको अधिवेशन ?
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १४औं महाअधिवेशनको कार्यतालिका भदौ १६ देखि १९ सम्म तोकिएको छ। तर अन्तिम समयसम्म क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नहुँदा १२ साउनबाट सुरु हुने भनिएको तल्लो तहको अधिवेशन अझै अलमलमा छ।
कांग्रेस महाअधिवेशनका लागि १२ साउनबाट तल्लो तहको अधिवेशन हुँदै केन्द्रको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ। त्यसका लागि कांग्रेससँग एक हप्ताभन्दा कम समय मात्र बाँकी छ।
तल्लो तहबाट सुरु हुने अधिवेशनको प्रारम्भिक मतदाताको रुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगोमा पुग्न लागेको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले दावी गरेको छ।
समितिका सदस्य तथा प्रवक्ता प्रदिप पौडेल सदस्यताको विषय टुंगो लागेर पार्टी सभापति सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने क्रममा छ।
‘हामीले प्रतिवेदन दिन सभापति देउवासँग समय पर्सि बिहीबारको मागेका छौँ। सभापतिज्यूले कहिलेको समय दिनुहुन्छ। त्यस अनुसार हाम्रो तर्फबाट टुंग्याउँछौँ,’ उनले उकेरासँग भने, ‘सदस्यताको अधिकांश विषय टुंगिएका छन्। बारा र सप्तरीका केही बाहेकको सदस्यताको विषय टुंगिएको छ। समितिको काम अन्तिम सदस्यताका टुंगो लगाउने अन्तिम चरणमा छ।’
सभापति देउवाले समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गर्नेछन्। यससँगै अधिवेशन सुरु हुनेछ। पौडेल सदस्यताको विषय टुंगो लगाउने क्रममा भएको ढिलाइका कारण १२ को कार्यतालिकामा हेरफेर हुने बताँउछन्।
‘कार्यतालिका अनुसार १२ साउनबाटै तल्लो तहको अधिवेशन सुरु हुने सम्भावना छैन। आठ/दस दिन पछाडि सर्नसक्छ। तर केन्द्रीय महाअधिवेशनको मितिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। नटुंगिएका स्थानको सदस्यता थाती राखेर पनि अधिवेशन सुरु गर्न सकिने बाटो खुलेको छ,’ उनी भन्छन्। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो नलागेका जिल्लाको हकमा केन्द्रले टुंगो लगाउने पौडेलले बताए। ‘सहमति हुन नसकेका विषय हामीले केन्द्रमा नै पठाइदिएका छौँ,’ उनले भने।
क्रियाशील सदस्यताका लागि देशभरबाट जम्मा ८ लाख ५२ हजारको नाम इन्ट्री भएकोमा ८ लाख २० हजारको संख्यामा सदस्यता कायम भएको पौडेल बताउँछन्।
कार्यतालिका अनुसार २० असारमा सदस्यताको टुंगो लगाइसक्नुपर्थ्यो। तर त्यसको दुई साताभन्दा बढी समयसम्म पनि यो विषयले निकास पाउन सकेन।
साउन २ मा बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले निर्धारित समयमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी तल्लो तहको महाअधिवेशनको मिति हेरफेरको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
२०७८ साउन ०५ गते १५:२३ मा प्रकाशित
स्थानीय तह गठन भएपछि उनीसहित मर्चवारका धेरै नागरिकको फुसको छानो उतारेर नयाँ घर बनाउने योजना बनायो। उजागिर सहित कोटहिमाईका २४ घर-परिवारलाई नयाँ घर बनाइदिने आश्वासन....
२०७८ साउन ०९ गते १२:२६ मा प्रकाशित
प्रतिष्ठान सञ्चालन हुँदा प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञानको उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा आवश्यक जनशक्ति तयार हुनेछ र सर्वसाधारणले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने सरकारी बुझाइ छ।....
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमै मन्त्रालयले २०७७ जेठयता खरिद गरेका मास्क, स्यानिटाइजर, ग्लोब्स लगायतका सामग्रीमा बजार मूल्यभन्दा धेरै तिरेको देखिएको हो। मन्त्रालयले २०७७....
आमाले त्यागेकी पुष्पा र अञ्जली हुर्काउँदै छन् लालबहादुर
२०७८ साउन ०७ गते १२:१४ मा प्रकाशित
अञ्जली कुजौलीमा फेला परेकी थिइन्। पुष्पा नवलपरासीमा। वन्यजन्तु प्राविधिक लालबहादुर महत उनीहरूका अभिभावक। दूध र च्याँख्ला हुन् उनीहरूको खान्की। अञ्जली दूध मात्र खान्छिन्। पुष्पाले च्याँख्ला....
वीर-ट्रमाको अनियमितता प्रकरण : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानविन थाल्यो
२०७८ साउन ०६ गते २१:२० मा प्रकाशित
विभिन्न समयमा परेको उजुरीका आधारमा सतर्कता केन्द्रले अस्पतालमा अनियमितता भए/नभएकोबारे छानविन सुरु गरेको हो। सतर्कता केन्द्रले असार ३० गते प्रतिष्ठानलाई पत्र नै पठाएर ३ दिनभित्र....